Iitattoos | Eyekhala 2022
Amaxabiso eTattoo axhomekeke kwizinto ezininzi, kubandakanya ubungakanani, ukubekwa, apho uhlala khona, ubuchule kunye namava wegcisa lakho, amaxabiso abo ngeyure, kunye nokuntsokotha kwetattoo…
I-125 yeeTattoo zomlenze eziLungileyo zaMadoda
Iitattoo zomlenze zihlala zixatyiswa kuba uninzi lwabantu lukhangela ukuba lubonwe engalweni, esifubeni, egxalabeni okanye emqolo. Ngaphandle koku, zininzi izimvo zomvambo opholileyo ezithatha…
Ukuba unomdla wokufumana itattoo eya kujongeka intle kakhulu ngokobuntu, emva koko umqolo wakho ngumbala ogqibeleleyo. Iitattoo ezisemva zisusela kubucukubhede kwaye…
Ngelixa uninzi lwamadoda lufumana ii-tatoo zenamba kuba zijongeka njenge-badass njengobugcisa bomzimba, abanye abantu baya kuba nomdla wokwazi ukuba iinkcubeko ezahlukileyo zidibanisa iidragons ezinentsingiselo enzulu. Njengokuba,…
I-101 yeeTattoos zesandla eziLungileyo zaMadoda
Ukuba ujonge ukwenza ingxelo enesibindi, emva koko unokufuna ukuqaphela ezi tattoos zezandla. Ukusuka kuyilo olulula, oluncinci ukuya koyikeka, umzobo we-badass, umvambo ngasemva…
I tattoo yesikhova inokuba yeyona tattoo iphefumlelweyo yezilwanyana kuwe. Ngelixa ingonyama, ingcuka kunye nee-tattoos zokhozi zibonakala zibudoda ngakumbi, ii-owl tattoos zamadoda zimele ulwazi, ubukrelekrele, umlingo kunye…
I-101 yeeTattoos eziBalaseleyo zikaRose zamadoda
Iitattoo zaseRose ziyabulelwa ngokungathandabuzekiyo ngenxa yenxalenye yokusebenza kwazo. Ngelixa i-rose tattoo ayisiyo ngcinga yokuqala onayo xa ucinga ngeembono ze-badass tattoo zamadoda…
I-101 Badass Tattoos yaMadoda
Ngee-tattoos ezininzi ze-badass onokukhetha kuzo, kunokuba nzima ukuba abafana bakhethe kuzo zonke uyilo olupholileyo kwi-Intanethi. Kodwa ezinye izimvo ze-badass tattoo zimalunga ...
I-125 yeeTattoos zangaphakathi eziBalaseleyo zaMadoda
Iitattoo zeBicep zibonelela ngeyona nto ipholileyo kakhulu ye tattoo kumadoda namhlanje. I-Sleek kwaye iyoyikeka, ii-tattoos zengalo yangaphakathi zivumela uyilo lwe-badass kodwa kube lula ukulufihla nokulufihla…
Ukuba uyoyika iintlungu zetattoo kwaye unomdla malunga neyona ndawo ibuhlungu yokufumana itattoo, siye saqulunqa uluhlu lweyona ndawo imbi kakhulu yokufumana itattoo. Iitattoos zi…
Iitattoo ezipholileyo ziza ngemibala emininzi, iimilo, izimbo kunye nobukhulu. Kodwa eyona tattoos yamadoda ifuna ubuchule kunye nemizobo eyahlukileyo. Ngapha koko, izimvo zomvambo opholileyo zinika ulungelelwaniso phakathi…
I-125 iiTattoos eziLungileyo zaMadoda
Iimpawu zangaphambili zivumela uninzi lweyona tattoo ilungileyo yamadoda. Amathambo engalo asezantsi ayaphola kwaye athandwa kakhulu kuba umphambili ubonelela ngendawo eyoneleyo yeengcinga zokuyila okwangoku…
I-101 yeeTattoos zesifuba eziLungileyo zaMadoda
Iitotto zesifuba ngokukhawuleza ziba zezona zimvo zithandwayo ze tattoo kubafana. Iitattoos zesifuba samadoda zibonelela ngendawo efanelekileyo yeempawu ezinamandla zamandla, ikratshi, ukuthembeka, isibindi,…
Iitattoo zomnqamlezo yenye yezona zinto ziyaziwa kakhulu yoyilo lwee-guys. Ukufakwa i-inki ngokulula ngumculi onobuchule, ii-tattoos ezipholileyo zomnqamlezo zamadoda azinasiphelo, zinesibindi kwaye zinentsingiselo. Hayi kuphela…
Xa kuziwa ekusikeni kwesitayile kunye nezitayile zamadoda, iinwele eziphakathi ubude bezisiqhelo ezithandwayo kule minyaka idlulileyo. Esefashonini kunye nefashoni, iinwele ezide ezinokuphakama zingaqala ukusuka…
I-125 yeeTattoos eziLungileyo zaMadoda
Iitottoo zeNeck ziyaqhubeka ukuba yenye yezona zimvo zibi kakhulu zeetattoo. Ngelixa ii-tatoo zentamo zamadoda zibonakala kakhulu, abafana abajonga imizimba yabo njengotyalo-mali lokugqibela…
Ukuba ukhangela itattoo entsha, uyayithanda ingqokelela yethu yezona mvo zibalaseleyo ze tattoo kumadoda. Ezi zoyilo zipholileyo zenza ezona tattoos zibalaseleyo esizibonileyo. Kodwa nge…
Ukuba ujonga iinwele zamadoda zamva nje ngo-2021, ke uya kuzithanda izitayile ezipholileyo zokucheba iinwele apha ngezantsi. Uninzi lweenwele ezithandwayo ziyaqhubeka ukuba mfutshane…
Iimveliso ezili-10 zeNtshebe zeMadoda aMnyama
Amakhwenkwe aphela iinwele
I-50 Blowout Haircuts yamadoda
Iinwele ezingama-25 zamadoda aneendevu
Iimveliso eziGqwesileyo zaMadoda eziQhelekileyo zeenwele
ilanga kunye nenyanga iimpawu ze-zodiac
wavuka umvambo engalweni
yintoni uphawu olunyukayo
indlela yokufumana uphawu lwakho olunyukayo
iwele idangatye lokuzalwa itshathi wokubala
amadoda aphakathi anawo iinwele
I-15 yeZayn Malik yeeNwele